अख्तियार प्रमुख परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ! — newsparda.com
अख्तियार प्रमुख परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली !
काठमाडौं – शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार राज्यका हरेक निकाय खडा भएका छन् । त्यसमा संवैधानिक अंग र आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यतिबेला ओली सरकारको ध्यान पूर्वमाओवादी लडाकू शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेमा देखिएको छ । ओलीले शनिबार केही पूर्वमाओवादी लडाकूलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउनुले उनी जसरी पनि प्रचण्डको राजनीति सखाप पार्ने रणनीतिमा रहेको प्रस्ट हुन्छ । प्रदीप ज्ञवालीको शनिबारको धम्की पनि त्यसकै कडीका रूपमा आएको बताइन्छ । पूर्वमाओवादी लडाकू शिविर व्यवस्थापन र लडाकूको भत्तामा करिब चार अर्ब अनियमितता भएको दाबी गरिँदै आएको छ । जसमध्ये माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला धेरै रकम बाँडिएको थियो । https://www.mediadabali.com/ बाट साभार गरीएको हो ।